महराको डे टिङ र बाँस्कोटाको से टिङ – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/महराको डे टिङ र बाँस्कोटाको से टिङ
कहिले जापान काण्ड भन्छन्, कहिले अस्ट्रेलिया काण्ड भन्छन् । मोबाइल र कम्प्युटरमा लुकीलुकी एक्लाएक्लै हेर्छन् । मन मिल्ने साथीलाई देखाउँछन्, मिलेर फेरि हेर्छन् । कतिले मुख रातो पार्छन्, कति दंग पर्छन् ।
खाइहालेको होइन क्यारे, खान खोजेको मात्रै हो । बोलेको कुरा फिर्ता लिएर सफाइ दिए नि हुन्छ । चोरेको कुरा फिर्ता गर्छु भन्दा त मुक्ति पाउने नजिर बसेको देशमा जाबो मुखले बार्गेनिङ गरेको त हो, म अब त्यस्तो गर्दिनँ भन्दा किन मुक्ति नपाउने ? काण्ड, काण्ड भनेर हेप्ने ? विजय तिमिल्सिना/उज्यालो अनलाइनबाट